N'ime ihe owuwu saịtị, ndụ ọrụ nke oriọna LED na mmetụta nke iji ya nwere njikọ chiri anya na mgbasa ya. Ọ bụrụ na nsonaazụ mgbasa ọkụ nke oriọna LED adịghị mma, ọ ga -emetụta ndụ ọrụ ngwaahịa a yana mmetụta ngwa. Ya mere, ọrụ nke radiator LED dị ezigbo mkpa. Na mkpokọta, ihe mejupụtara ọkụ ọkụ LED bụ LED, usoro mgbasa ọkụ, ọkwọ ụgbọ ala, na oghere. Akụkụ kachasị mkpa na nhazi ọkụ ya bụ ọkụ ọkụ ọkụ LED. N'okpuru, anyị ga -ewebata n'ụzọ zuru ezu ọtụtụ ụzọ mgbaze ọkụ ọkụ nke radiators LED.
Okwu mmalite nke ụzọ mgbaze ọkụ ọkụ nke radiators LED:
1. Ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ-aluminom na-eku ọkụ ọkụ
Fins na -enwu ọkụ nke aluminom bụ usoro mgbasa ọkụ nke a na -ejikarị maka radiators LED, ọkachasị iji mee ka mpaghara radiator gbasaa ọkụ site na nchapụta ọkụ aluminom.
2. Ọkpụkpọ ọkụ ọkụ ọkụ-shei plastik na-enye ọkụ
Ọkpụkpụ plastik na -arụ ọrụ na -anọchi mkpuchi aluminom na mkpuchi ọkụ LED na plastik na -ekpo ọkụ iji bulie ike radieshon ọkụ iji nweta ebumnuche nke mgbasa ọkụ.
3. Ikanam ọkụ ọkụ-ọgwụgwọ radieshon elu
Usoro ọgwụgwọ radieshon dị n'elu bụ iji teepu ọkụ na-ekesa radieshon n'elu oriọna LED iji mee ka ọkụ pụọ n'elu ụlọ oriọna iji nweta ebumnuche mgbasa.
4. LED radiator - ndị na -ahụ maka ikuku ikuku
Igwe eji arụ ọrụ ikuku mmiri na -eji ọdịdị nke ụlọ ọkụ oriọna LED imepụta ikuku na -ebugharị iji nweta ebumnuche mgbasa ọkụ. Nke a bụkwa usoro mgbasa mgbasa ọkụ dị ọnụ ala ugbu a dị ọnụ ala.
Ihe ndị a dị n'elu bụ ụzọ mgbapụ ọkụ ọkụ 6 nke a na -ahụkarị na radiators LED.
Nchịkọta nke ụfọdụ nsogbu nke mgbasa ọkụ ọkụ LED, ụzọ kachasị mma iji kpochapụ okpomọkụ nke oriọna ada, nsogbu mgbaze ọkụ nke oriọna ada, gịnị ga -eme ma ọ bụrụ na ikpochapu ọkụ nke oriọna oriọna ọkụ adịghị mma, ekwesịrị ịchekwa mpe mpe mpe akwa nke oriọna oriọna ọkụ, ụzọ mgbapụ ọkụ nke oriọna ada, na mpaghara mkpofu ọkụ nke oriọna oriọna, ọkụ ọkụ oriọna nke onye mere onwe ya mere. griiz, 1w duru oriọna oriọna kwesịrị ịgbasa okpomọkụ, ọkụ oriọna oriọna cha cha ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ oriọna oriọna ọkụ 1w ole mpaghara, ọkụ oriọna oriọna ọkụ na -ekpochapu efere efere aluminium, oriọna oriọna oriọna oriọna na usoro Mwepụ ọkụ dị ukwuu, oriọna oriọna oriọna ọkụ mgbasa pụrụ iche, oriọna bead ịgbado ọkụ okpomọkụ na oge.
900w Dugara Iju Mmiri Light, Ulo elu Led Panel Light , Philips 3030 Dugara Iju Mmiri Light, Dugara Solar rechargeable Iju Mmiri Light, Mere Floodlight 30w, Dugara Tri-Gosiri Light eletrik ,